Trump oo doonaya in maanta laga takhluuso Obamacare - BBC News Somali
Trump oo doonaya in maanta laga takhluuso Obamacare
24 Maarso 2017
Madaxweynaha waddanka Mareykanka, Donald Trump, ayaa waxa uu dalbaday in cod loo qaado dib u habaynta lagu sameynayo adeegga daryeelka caafimaad ee dalkaasi, si meesha looga saaro qorshihii uu sameeyay maamulkii Obama, inkastoo aanay weli caddayn in ay xisbigiisu uu haysto taageero ku filan si ay arrintaa u meel mariyaan.
Kaddib maalin ay guuldaraysteen wadahadallo ka socday magaalada Washington, ayaa waxaa la filayaa in cod loo qaado arrintan maanta oo Jimce ah.
In meesha laga saaro oo la badalo adeegga caafimaad ee Obamacare ayaa waxa ay muhiim u tahay ajandaha Trump.
Madaxweyne Trump ayaa ka dalbaday xildhibaanada xisbigiisa jamhuuriga in ay maanta oo Jimco ah cod u qaadaan isbadalka lagu sameynayo sharcigan.
Waxaa uu ku hanjabay in haddii ay arrintaasi dhici weydo uu ka socon doono, taa oo ka dhigan in sharcigaasi uu sii jiri doono.
Usbuucan oo dhan ayuu Trump waxa uu isku dayayay in uu ka dhaadhiciyay xubnaha xisbigiisa in u codeeyaan qorshihiisa caafimaad ee uu ku badalayo ObamaCare.
Cadaadiska Trump ayaa ku khasbi doona xildhibaanno badan oo ka tirsan xisbigan oo diidanaa qorshihiisa in ay haatan u codeeyaan oo ay ka takhluusaan sharci uu horey u saxiixay madaxweynihii hore ee dalkaasi ee Obama.
Dhibaatada ayaa ah in xildhibaanada jamhuuriga dhexdooda aysan mowqif ahaan ka mideysnayn ka takhluusidda arrintan.
Afhayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan oo ka tirsan xisbigan jamhuuriga oo saxaafadda la hadlayay kaddib shirk dhacay Aqalka Cad ayaa sheegay in muddo siddeed sano ah in ay u soo dagaalamayeen in la laalo qorsha daryeelka caafimaad ee Obamacare.
Shalay oo khamiis ahayd ayaa la doonayay in codka arrintan loo qaado haseyeeshee kala qaybsanaan ka dhex jirta xisbiga madaxweyne Trump ee Jamhuuriga ayaa arrintaa hakisay.
Trump waxa uu hadda doonayaa in arrintaasi cod loo qaado maanta oo jimca ah, si kastaa oo ay natiijada u dhacdaba.
Sharcigan cusub ayaa u baahan 215 cod si loo meel mariyo oo looga guuleysto xubnaha jamhuuriga ee diidan, kuwaasi oo rumeysan in in uusan wax weyn ka badali karin daryeeelka uu horey Obama u soo hindisay.
Arrintan ayaa waxa ay ka mid ahayd ballan qaadyadii Trump, xilligii uu u tartamaya xilka uu hadda hayo.
Waxa ayna hadda u muuqataa in arrintan cod loo qaadi doono balse natiijada ka dhalan karta ayaanan la xaqiijin karin.